Isikhokelo kwiiSisombululo soMsebenzi iLone liShishini (A10005) | Izisombululo ze-OMG
Abasebenzi abahamba bodwa kumashishini awahlukeneyo bajongana nemingcipheko eyahlukeneyo, kuphakathi kwemisebenzi yomqeshi ukubakhusela ngokuqinisekisa ukhuseleko lwabo nokuba yintoni na abayenzayo. Umngcipheko uqhelekile ngelixa usebenza wedwa unokusukela ekuweni nasekutshisweni okanye ekonakaleni kwindawo. Kungoko uvavanyo lomngcipheko luyimfuneko kakhulu, iinkampani kufuneka zifikelele kwiimeko apho zisebenza khona kwaye ziyazi imingcipheko abanokuthi abasebenzi bazo bafumane kuzo emva koko bafumane izisombululo kubo. Ukusebenzisa itekhnoloji kumaxesha akutshanje kuye kwaba yinto eye yakhulisa inani labasebenzi abodwa. Ngequbuliso kukholelwa ukuba kukho isixhobo abanokuxhomekeka kuso esinokuqinisekisa ukhuseleko lwabo kunye nokudlulisa imiyalezo ye-SOS ngendlela ezenzekelayo ukuba ngaba kwenzeke nantoni na. Besiya kujonga amanye amashishini, umngcipheko abajongana nawo kunye nezisombululo ezinamathuba aphezulu kakhulu okutshintsha izinto. Amashishini ngala:
Amashishini ezolimoAbasebenzi bebodwa abakwicandelo lezolimo basebenza nezilwanyana okanye oomatshini abasebenza, abasebenzi abakweli candelo bathambekele kwimingcipheko emininzi xa besebenza. E-UK ezolimo zinamaxesha e-18 aphakamileyo kunamanye amacandelo okwenzakala kwabantu. Imiceli mngeni yezempilo abajongana nayo aba basebenzi ayinakujongwa. Kukho imingcipheko emininzi ejongene nabasebenzi kwifama, le mingcipheko iveliswa ngokwenza imisebenzi njengokusebenza endle ngezithuthi ezinzima kunye nezinto zokuhambisa ngesandla. Ngokwengxelo yezokhuseleko e-UK abantu abajongana nezilwanyana basengozini enkulu yokwenzakala. Ezi ngozi zinokubandakanya. Eminye yemingcipheko ebandakanyekayo yile:
Ukuwa ukusuka kwindawo ephezulu kunokubangela ukwenzakala okubulalayo, ukurhintyelwa ngezixhobo ezonakalisayo okanye izingodo kukhokelela ekufeni kwe3 ngakumbi kwi-2017 e-UK. Inokwenzeka into efanayo naphi na emhlabeni.
Ukulimala kugcinwa okuninzi xa usebenza nezilwanyana, ukusebenza ngeenkomo yeyona nto yabulala ifama kwi2017. Inike ingxelo ngesohlwayo se33.
Iitrektara ezihambayo zinokubetha abasebenzi kwaye ekugqibeleni zibenzakalise okanye zibabulale. Kukho nomngcipheko omkhulu wokuxhalabisa malunga nokuqhuba malunga nezithuthi ezihambayo.
Ezi ngxaki kufuneka zitshekishwe kwaye ziqwalaselwe ngelixa kusenziwa izisombululo zokukhusela abasebenzi, ukuqhuba uqeqesho rhoqo kunokuba luncedo kakhulu. Utshintsho lwamaxesha onyaka kufuneka luqwalaselwe, kuya kufuneka kuhlaziywe ukuphatha izilwanyana kunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo. Oomatshini kunye nezixhobo ezinezithuthi kufuneka zigcinwe kakuhle kwaye zinikezwe iinkonzo, kufuneka zikhutshelwe iimpahla zokhuselo. Yonke imisebenzi kufuneka ithathelwe ingqalelo ngokufanelekileyo ukuba iya kufuna ukubeka esweni okanye ukubhangqa kwinkqubo yomhlobo ukuze umsebenzi wenziwe. Kananjalo, qinisekisa ukuba iinkqubo zokubeka esweni kunye nokungena ziyasebenza ngokugqibeleleyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu sebenzisa isicombululo sokhuseleko sisodwa esenza le nkqubo ibe lula kwaye isebenze. Eyona nto unokuxhomekeka kuyo yitekhnoloji.
Umzi mveliso: Nabani na ongumnini okanye ophethe umgodi ophethe ukuqinisekisa ukuba umngcipheko onxulumana naye nawuphi na umntu osebenza yedwa uvavanyiwe ngokupheleleyo. Amanyathelo okuqinisekisa ukulawula imeko ayaphunyezwa, ngelixa kusebenza phantsi komhlaba kukho umthetho wokuba abasebenzi basebenze bodwa ukuba bahlolwe kwaye batyelelwe rhoqo rhoqo kwiiyure ze-2. Kuxhomekeke kubume obunobungozi bokusebenza kwindawo yodwa, ke akukho msebenzi kufuneka ube wedwa kwaye xa usebenza nabanye kufuneka uhlale kumgca wabo wokubona. Ngelixa usebenza emgodini kubalulekile ukuba uhambisane nemithetho elawula ilizwe okanye imithetho yezemigodi yaseburhulumenteni. Eminye yemingcipheko yokusebenza kumgodi yile:
Amadwala amalahle: Olu uthuli lunokuba yingozi kakhulu kwaye ugxotha umsebenzi kwimizuzu
Ngexa usebenza emigodini, iisuphavayiza kufuneka ziqinisekise ukuba:
Bonke bayazi ngomngcipheko omkhulu wobungozi kwaye ukuba lonke unxibelelwano luyalandelwa
Zonke iindlela zokwenza kufuneka zithathwe ukulawula ingozi kunye nokunciphisa umngcipheko onxulumene nomsebenzi
Kuya kufuneka baqhelane nezixhobo ezifanelekileyo zokhuseleko kunye nendawo okuyo.
Xa umsebenzi ephantsi kubalulekile ukuba anikwe ingqalelo ngokukhawuleza. Kufuneka kwenziwe amanyathelo okunciphisa ixesha phakathi kwengozi kunye nonyango. Amanye ala manyathelo zezi:
Iikhamera zovavanyo lwevidiyo kufuneka zisetyenziswe
Abantu abasebenza yedwa kufuneka rhoqo banxibelelane nabanye abasebenzi basemgodini
Isixhobo se-radio-way esineendlela ezimbini kufuneka sisebenzise
Inkqubo ye-alarm ye-duress yangasese inokusetyenziswa.
Umzi mveliso wokwakha: Abasebenzi abakwimeko yokwakha bajamelana nengxaki ekhethekileyo yomngcipheko wentlalo kunye nokusingqongileyo, oku kubandakanya ukuphanga kunye nokwenzakala kwesiza. Kukho icandelo elicandelo lomsebenzi wokwakha elifuna ukusebenza ngokukodwa okanye ukusebenza ngamaqela amancinci kwaye kubandakanya imisebenzi efana: nokwakha izinto ezintsha, ukwenza utshintsho kwizakhiwo esele zenziwe okanye ukwenza ulungiso kwisakhiwo esele sikhona. Abo bakumsebenzi wokwakha bahlala bebandakanyeka ekusebenzeni ngaphezulu kwendawo ephezulu yokuphakama kwaye oku kunokuba yingozi kakhulu. Ukusebenza ngezixhobo ezinzima kunye noomatshini nako kubabeka emngciphekweni omkhulu wokusingqongileyo. Ngokwe-Bureau yeenkcukacha-manani zabasebenzi e-US; Ukuwa, ukuthambalala okanye uhambo lwabangela ukubulawa kwabantu kwi-699 kwi-2013. Ukongeza, ingxelo yona yathi ukuba kuloo nyaka u-717 wabulawa ngabantu ngenxa yemeko ebukhali. Abasebenzi abasebenza yedwa benza iiprojekthi zabo kungekho mntu ujonge kubo okanye babazise ukuba kukho into engahambanga kakuhle. Kukho izinto ezine ezikhokelela ekufeni kwabasebenzi kwiindawo zokwakha. Amagama abo njengabatshabalalisayo abane, aba:
I-Electrocution (malunga ne-9%)
Ukubethwa yinto (ngaphezulu kwe-10%)
Ukutshona (ngaphezulu kwe-36%)
Ukubanjwa phakathi kwezixhobo zeshishini (i-2.5%)
Ngelixa aba basebenzi bejamelene nengozi enkulu yezendalo kuninzi lwamanye amashishini, abapheleli kolu hlobo lomngcipheko. Ngenxa yobunjani bomsebenzi wabo kunye neeyure ezingaqhelekanga zokusebenza bajongana nemingcipheko ekuhlaleni. Kufuneka baqwalasele okusingqongileyo kunye nayo yonke into eyenzekayo ebangqongileyo.
Ngenxa yohlobo lomsebenzi owenziwa ngumsebenzi yedwa, kubalulekile ukuba babe nesisombululo esisebenza kakuhle kakhulu esasiza kunceda ukususa le misebenzi iza nayo. Ezinye izixhobo ezinokusetyenziswa ngabaphathi zezi:
Ukuqinisekisa ukuba abasebenzi banxiba iigiya ezifanelekileyo zokukhusela
Uqeqesho kwezempilo nokhuseleko
Iimpawu ezibonakalayo ezicacileyo
Ngokuchanekileyo ukwakha kunye nokugcina isikripthi
Ukuhlolwa kwezixhobo kunye nezixhobo rhoqo
Inkqubo yokutshekisha okhuselekileyo: oku kuthetha ukuba umlindi ujongisisa amaxesha ngamaxesha ngokuphendula ngokuzenzekelayo
Isixhobo se-SOS: oku kunokusetyenziselwa ukuthumela i-alam xa umsebenzi ekuhlukunyezwa xa ekwindawo
Imizi mveliso: eli shishini lenze indima yokuguqula izinto eziluhlaza kwiimveliso ezixabisekileyo, amaqela asebenza malunga namacandelo e-20 aquka iphepha, iplasitiki, ukutya, ielektroniki kunye ne-biotech ne-pharma. Ukwenza umsebenzi wenziwe wena kufuneka abasebenzi uchithe iiyure ezininzi zomsebenzi nezixhobo zomsebenzi onzima ekwenzeni imisebenzi yemveliso. Ukuqinisekisa impilo yabasebenzi kolu shishino kubaluleke kakhulu, aba basebenzi yeyona nto ibaluleke kakhulu kuwo nawuphi na umzi mveliso. Ngokwe-Bureau yezibalo zabasebenzi e-United States, olu shishino lunika ingxelo ngaphezulu kwe-300 yomsebenzi oqhutywa minyaka le. Kwakhona kwi-2013 kunye ne-2014 ngokwabaphathi bezokhuseleko abasebenza kwimizi-mveliso abalwa malunga ne-10% yokufa kwabantu baseBritane e-UK. Amawakawaka abasebenzi ngonyaka aneengozi ezibenza bakhubazeke isigxina, uninzi lwazo olungakwaziyo ukusebenzela ubomi bonke. Amandla okuthumela impendulo ekhawulezileyo yempembelelo anganciphisa ukubandezeleka kwabasebenzi abodwa abalinde uncedo kunye nokunciphisa iimpembelelo zokulimala kwexesha elide. Eminye iseti yokusebenza njengezityalo zamachiza ibonakalisa ingozi kunezinye. Isoyikiso sokuchithwa kweekhemikhali kunye nokubonakaliswa kukongeza kwimfuno engxamisekileyo yomgaqo-nkqubo wokhuseleko lwabasebenzi olulodwa. Abasebenzi mabaqinisekise ukuba wonke umntu osebenza yedwa enezixhobo ezinzima unokhuseleko olufanelekileyo.
Ukukhusela impilo yabasebenzi bebodwa, kubalulekile ukuba inkampani iqale ichonge bonke abasebenzi abasebenza bebodwa ngaphambi kokuseka imigaqo-nkqubo ukukhusela impilo yabo. Oku kubenza bazi ukuba yeyiphi imigangatho yokhuseleko ekufuneka isetyenziswe, abaphathi abahlali besazi kwabo basebenza nabo okanye abo basebenza kunye neqela. Ukuchongwa kwemiba enokunyusa umngcipheko kubalulekile. Ukuqhuba uvavanyo lomngcipheko kubaluleke kakhulu kuba kukuvumela ukuba wazi umngcipheko ojamelene nawo kwaye uncede ukuba uyithelekise nendlela elungileyo. Umgaqo-nkqubo wokhuseleko labasebenzi ubalulekile kubaluleke kakhulu kuba uthatha umngcipheko ochongiweyo. Abasebenzi bebodwa mabasebenzise izisombululo zetekhnoloji zamva nje zemisebenzi yabo. Imizi mveliso kufuneka ifakelwe isixhobo sonxibelelwano esinokuvumela impendulo ngokukhawuleza xa kukho isigameko. Abasebenzi abasebenza bodwa kwimizi mveliso bajongana nengozi enkulu kunabasebenzi bamaqela, kubaluleke kakhulu ukuba ishishini libe nomgaqo-nkqubo olungileyo kunye nesisombululo esisebenzayo sabasebenzi.
umbaneUkusebenza ngombane kunokuba yingozi kakhulu, abasebenzi kumzi-mveliso wokuhambisa umbane bajongane nomngcipheko wokufakelwa kombane ukuba bachukumisa ngokungakhathali umbane okanye banxibelelane nenkqubo yegridi. Ukulondolozwa kokugcinwa kwenkqubo yamandla esiza esikude nako kunokuba ngumsebenzi oyingozi. Xa usebenza wedwa kukho amathuba amakhulu okuba sengozini oku kungenxa yemingcipheko ephezulu yeengozi ezibangelwe ngumzi-mbane, ukufumana uncedo kunye nomsebenzi kuba ngumsebenzi onzima kakhulu kuba abasebenzi bengafumaneki. Amaxesha amaninzi ukufumana inkxaso ngokukhawuleza okanye uncedo lwezonyango kunokuba ngumahluko phakathi kobomi obutshintsha umncinci kwaye wenzakale. Eminye yemingcipheko abajongana nayo yile:
Iziphoso kumgca ezinokubangela idangatye
Qhagamshela kunye nobomi bobomi obunokubangela ukothuka kunye nokutsha
Umlilo okanye ukuqhuma apho umbane unokuba ngumthombo wokucekisa kwindawo enokutsha okanye iqhuma.
Njengomqeshi, luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba oku kulandelayo kuyenziwa ukuqinisekisa ukuba ubomi bukhuselekile. Bazi:
Zonke izixhobo ezisebenza ngombane zilungele ukusetyenziswa
Isidibanisi sentambo esichanekileyo okanye isihlanganisi kufuneka sisetyenziselwe ukudibanisa ubude beentambo kunye, ukudityaniswa okuhlanganisiweyo kufuneka kuthintelwe kuhlala kukhokelela ekutsaleni
Indawo ekukhuphela iziseko zayo mayingabi ngaphezulu kakhulu kusetyenziswa ii-adapter
Umzi mveliso weoyile kunye negesi: Umzi-mveliso weoyile njengeshishini lombane ufuna uqwalaselo olukhulu kwaye ukhuseleko lwabasebenzi luyodwa kufuneka luqinisekiswe, xa kuhlolwa imibhobho kunye nokuvuza kukho ubungozi. I-Sprain kunye noxinzelelo ziphakathi kweentlobo eziqhelekileyo zokulimala okwenzakaliswe ngabasebenzi kwicandelo leoyile kunye negesi. Eminye yemingcipheko ethe yafunyanwa xa usebenza kwicandelo leoyile negesi yile:
Ukukhutshwa kweHydrocarbon (oku kunokuba yingozi kakhulu kwaye kuyingozi)
Umlilo okanye ukuqhuma ngesiquphe
Ukulahla kwezinto ezinkulu nezinzima
Obu bungozi buchazwe ngasentla bunokubangela ukwenzakala okukhulu okanye kubhubhe kwezinye iimeko, ukuba umsebenzi uwedwa kuyenza mandundu ngakumbi into yokuba angonzakala xa ebengahoywanga ngokukhawuleza. Abasebenzi bebodwa bajamelene nengozi enkulu yomsebenzi, bajamelana nengozi ezinje ngokuhamba nje, uhambo, ukuwa, ukusikwa kunye nokuvezwa kwiigesi ezinetyhefu nezinokutsha. Uninzi lweendawo zokucoca ioyile, iirigs ezingaselunxwemeni, kunye neefektri nazo zithathwa njengeendawo ezinobungozi. Ezi ndawo zihlala zigcwaliswa ngeegesi ezinokutsha, ukungcola, uthuli, ulwelo okanye umphunga onokubangela ukuqhuma okukhulu. Kuzo zonke ezi zinto, kuye kwanyanzeleka ukuba umbutho usebenzise izixhobo zetekhnoloji njenge-iHelp ezinokunceda ngonxibelelwano lwendlela ezimbini eziphindwe kabini njenge-tracker kwaye zinezinto ezifumanayo. Inkampani kufuneka iqinisekise ukuba oku kukwenziwa ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi abodwa. Bazi:
Imizi-mveliso yococeko: Ushishino lococeko luhambelana nomzi mveliso wezempilo kwaye lubhekisa kuyo yonke inkathalo kumakhaya nakumakhaya abalupheleyo. Abasebenzi bahlala besebenza njengenxalenye yeqela. Bangasasazeka ngamanye amaxesha ngokwemisebenzi yabo kunye nendima abayidlalayo, ngeli xesha baba ngabasebenzi bodwa kuba wonke umntu ngoku kufuneka enze eyakhe indima ngelixa eyedwa. Bafumana inkxaso ngokubanzi koogxa babo kodwa oku kudla ngokwamaxesha. Ukongeza, ngamanye amaxesha abasebenzi banokuthi bacelwe yinkampani ukuba bahambe nomhlali kwindawo yokuqeshwa okanye kutyelelo lokuphuma. Olu hambo luhlala lubandakanya ukusebenza kweqela elinye. Kwinkqubo yokhathalelo lwaseburhulumenteni, zihlala zinemicimbi kuba zihlala zibekwa zodwa kumakhaya abasebenzisi beenkonzo ngaphandle kwenkxaso kwangoko koogxa babo kunye neesuphavayiza. Umngcipheko obandakanyeka koku kubandakanya:
Ukunyusa umngcipheko weengozi, ukonzakala okanye nokuba sempilweni
Ukwanda komngcipheko, umzekelo, apho kukho ubundlobongela, ukugula ngesiquphe, umlilo okanye ezinye iimeko zongxamiseko
Ngoku umngcipheko ubonakele sihamba sijonga into enokwenziwa ngumbutho ukuqinisekisa ukuba impilo yabasebenzi ayonakali. Imisebenzi yomqeshi yile:
Ukuqonda uxanduva lwabo lomthetho njengomqeshi
Ukuqinisekisa ukuba uvavanyo lomngcipheko luyenziwa kunye nezicwangciso ziyaphunyezwa
Ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bodwa banazo izixhobo eziyimfuneko noqeqesho
Yiba nenkqubo yokujongana nengozi yabasebenzi abodwa
Qinisekisa ukuba bababonelela ngeeselfowuni kunye nee-trackers ze-GPS ukuphucula unxibelelwano kunye nomsebenzi.
Umzi-mveliso wezemali: Olu shishino lunento yokwenza nemali kunye nemicimbi yezemali, abasebenzi bebodwa apha bathanda ukuhlaselwa ekuhlaleni kunalo naluphi na olunye ucelomngeni. Ihlala injalo ingcinga yokuba abantu bakholelwa ukuba nabani na ojongana nemali unemali okanye unokuhlala ebanika ukufikelela kwezi mali. Oku kubeka kodwa abasebenzi kumaziko ezemali kwipinki xa bebodwa, baye baphange kwaye bahlukunyezwe kwisicelo sokuba kufuneka banikeze imali. Le mingcipheko izise umvandedwa ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo kubasebenzi abaninzi njengoko bebona ukhuseleko lwabo lungasaqinisekiswa nje ukuba badityaniswe nomzi mveliso wezezimali. Eminye yemingcipheko abajongana nayo aba basebenzi yile:
umpu wokubamba umpu
ukuthinjwa endaweni yomsebenzi
ukucela ukufikelela okunyanzelekileyo kumaziko emali ukuze abambe iimali
Ezinye zezisombululo ezinokubonelelwa ngabaqeshi zezi:
Ukubonelela ngezixhobo zonxibelelwano ezinokuzisebenzisa ukunxibelelana nokuxela umphangi
ukunika umkhondo ukuba uncede ekufumaneni aba basebenzi kwiimeko zokuthinjwa kwisikhululo somsebenzi
ukubonelela ngoqeqesho lwabasebenzi olwenza ukuba balindele kwaye balungele iimeko ezifana nezo
Shishino lomshuwalense: Umzi mveliso weinshurensi ujongene ikakhulu nokuqinisekisa ukubekwa ityala kwiimeko ezizayo. Oku kuthetha ukuba bafuna abasebenzi ukugcina ishishini leinshurensi lisebenza. Ukusebenza yedwa kuza kudlala apha xa kufuneka umntu oza kuthetha nomnye inkampani yomnini wenkampani enkulu ukuba babuze inkampani yakhe. Oku kunokuvakala ngathi kulula kakhulu kwaye kulula ukwenza imisebenzi ngaphandle kokuphulula ubushushu, kodwa akukho lula njengoko kucingelwayo. Amaxesha amaninzi aba basebenzi bodwa kufuneka bahambele kude kwaye kufutshane kwaye iimeko ezininzi ezikhokelela kwiimeko ezingalindelekanga zinokwenzeka. Umsebenzi yedwa unokuhlaselwa sisilwanyana esithile, banokuba baphangiwe, banokuxhatshazwa ngokwesondo kuba bengabantu, banokufumana iimeko ezinobungozi kwaye abo bantu banokugula basendleleni okanye baphulukane nako. Ukuza kuthi ga ngoku, kuyimfuneko ukuba umqeshi abeke iinkqubo ezininzi kwindawo ukuqinisekisa ukuba bayanceda abasebenzi babo kwaye bazigcine zikhuselekile. Ezinye zezi:
Ukubonelela ngesithuthi sokuhambisa abasebenzi okanye abasebenzi bebodwa kwindawo yabo, banokufumana umqhubi wabucala oku kuthintela ifom ukuba ingahambi kakuhle
uvavanyo lomngcipheko emsebenzini
Ukubonelela ngezixhobo zonxibelelwano nomsebenzi ukwenza unxibelelwano oluhle ngalo lonke ixesha
ukusebenzisa umkhondo we-GPS kuya kunceda ekwazini indawo abasebenzi kuyo yonke indawo ngexesha
Ukubonelela ngesixhobo sabasebenzi abodwa ukuze uzikhusele nako kubaluleke kakhulu
Ishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba: Inkxalabo enkulu yabantu abasebenza kwicandelo lepropathi (i-realtor, iiarhente zezindlu, kunye nabaphathi bepropathi, ukuvumela iiarhente) kukhuseleko lwabo. Luhlobo lweshishini eli lokuba iiarhente zihlala zisebenza zodwa- kwizakhiwo zabathengi okanye kubathengi okanye kubaqeshi, okubenza babekeke emngciphekweni wokulimala ngezenzo kunye nokuziphatha kwabanye abantu. Awusoze wazi ngokuqinisekileyo ukuba uyakufumana ntoni emva kwalomnyango. Ngokwendalo ukusebenza wedwa kukhulisa umngcipheko wayo nayiphi na imisebenzi, kuba iiarhente ezihlukaniswe noncedo kunye nenkxaso koogxa, ukulibaziseka ekufumaneni uncedo kuncedo lwezonyango okanye lweenkonzo zikaxakeka kungabonyusa ubom kunye nemiphumo yokulimala. Nangona kunjalo ezi arhente azikho emngciphekweni wabanye abantu kodwa nakwiingozi zendlela, iihambo, ukugula kwezigulo kunye nengxakeko yezonyango zonke ziyingozi yokwenene ekufuneka zilindelwe kwaye zilungiselelwe. Umhlaba uyatshintsha kwaye kukho ithoni yengozi elinde phandle phaya. Akunakwenzeka ukuhlala usazi apho uya khona okanye uhlobo lwabantu oza kudibana nabo apho. Kukho izisombululo zokujongana neminye yale mikhwa, yile:
Ungaze ucinge ngokhuseleko kwaye ungaze ucinge ukuba indawo ikhuselekile
Sukucinga ukuba umxhasi ukhuselekile kwaye akukho mngcipheko, umsebenzi uzibeka esichengeni
Umqeshi kufuneka afumane iinkcukacha ezaneleyo kubathengi
Kufuneka kubekho inombolo yokufowuna okanye umntu afikelele kwiimeko zikaxakeka
Abasebenzi ababodwa kufuneka baqeqeshe ngokubaluleka kokuhlala betsala umnxeba, emntwini kwaye uhlala etsala ngokukhawuleza
Inkampani kufuneka inike umgca ophumelelayo wonxibelelwano kubasebenzi babo, le migca kufuneka ikwazi ukunxibelelana neofisi, umphathi, inkqubo yomhlobo kunye namapolisa.
Ukubonelela ngeqhosha lenkqutyana kubasebenzi kunokuba kubaluleke kakhulu njengoko kuya kuba nakho ukwenza kusebenze ngobulumko.
Olunye uqeqesho olusisiseko lokuzikhusela kufuneka lunikwe aba basebenzi
Onke la mashishini onke anemingcipheko yawo eyahlukeneyo, kodwa ixhaphakile kulo lonke itekhnoloji ingakumbi ngezixhobo zonxibelelwano isombulule uninzi lwale mingcipheko babeya kujongana nayo aba basebenzi. Nangona kunjalo kunyanzelekile ukuba abasebenzi basebenzise ukuqonda kwabo kwaye bahlala beyazi imeko yabo engqongileyo. Kufuneka bakhumbule ukuba umsebenzi wabo unokubeka umngcipheko omkhulu kwaye abanakukwazi ukujongana nawo wonke umntu kwaye bawukhathalele. Ukhuseleko lwabasebenzi ekugqibeleni, ukuwela ezandleni zabasebenzi kunye nabaqeshi
3827 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-6 Namhlanje